မေလ 2020 | RayHaber | raillynews
လများ: မေလ 2020
Xperia Hotels သည် Erciyes တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ မြို့ပြမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Memduh Büyükkılıçကမြေပြိုခြင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိနေသောဟိုတယ်သည်ကုတင် ၅၅၀ ဆံ့နိုင်သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ မြို့ပြမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh [ပို ... ]
Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာသည်ဘတ်စ်ကားလိုင်း ၅၂ ခုနှင့်အတူ 52 - 07.00, 09.00 - 17.00 အကြားအကောက်ခွန်မဲ့နိုင်ငံသားများအတွက်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးမည်။ စနေနေ့, မေလ 19.00 နှင့် 23,25 [ပို ... ]
TCDD ကိုမည်သည့်အချိန်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသနည်း။ ၁၉၂၃-၁၉၆၀ ကြားတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော ၃,၅၇၈ ကီလိုမီတာရထားလမ်း၏ ၃,၂၀၈ ကီလိုမီတာသည် ၁၉၄၀ အထိပြီးစီးခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းအဖွဲ့အစည်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည် [ပို ... ]
၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ Aprilပြီ ၁၂ ရက်တွင် Ordu တွင်မွေးဖွားခဲ့သူ Ali İhsan Uygun သည် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ Istanbul နည်းပညာတက္ကသိုလ်လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဌာနမှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်ဌာန [ပို ... ]
HAVELSAN မှတည်ဆောက်ခဲ့သောဆဌမရေငုပ်သင်္ဘောသတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းစနစ် (DBDS) သည်ရေငုပ်သင်္ဘောစီမံကိန်းသစ် (YTDP) ၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမှ ထွက်၍ စမ်းသပ်မှုလိုင်းတွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဂျာမန် TKMS ကုမ္ပဏီနှင့်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (SSB) အကြား [ပို ... ]
ရုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီအုပ်စုသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့်ကဏ္ this တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုပြင်းထန်လာစေခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိခြင်းသည်ရုံးများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
သမ္မတကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဥက္က္ဌ။ ဒေါက်တာ Ismil Demir, STM ကာကွယ်ရေးနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့ STM Think Tech ၏ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့်ပြုလုပ်သောတူရကီ Kovid-19 and Turkey and Process and Beyond [ပို ... ]
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (UNWTO) သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်မေလ ၂၀၀၀ တွင်ဘာရိုမီတာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တူရကီသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၆ ကြိမ်မြောက်အလည်ပတ်ဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီး ၂ ခုမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းမှရရှိသည် [ပို ... ]
မိသားစု၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီး Zehra Emerald Selcuk နှင့် Covidien ကာလ ၁၉ ရက်မတ်လ ၃၀ တွင် ၀ န်ကြီးချုပ် Recep Tayyip Erdogan ၏ ဦး ဆောင်မှုဖြင့်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ [ပို ... ]
၀ န်ကြီးSelçuk: မသန်စွမ်းသူ ၄၀၂ ယောက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျန်ဖြေပေးခဲ့သည်
မိသားစု၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးဌာနနှင့် URKUR တို့မှတဆင့်မသန်စွမ်းသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ၀ န်ကြီးဌာနမှအကောင်အထည်ဖော်သောစီမံကိန်းများကြောင့်မသန်စွမ်းသူများအားဘဝကိုပိုမိုတင်းကျပ်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်။ [ပို ... ]
Başkentrayနှင့် Marmaray သည်အခမဲ့လား။
အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်ရောက်ရှိချိန်တွင်Başkentrayနှင့် Marmaray တို့၏နိုင်ငံသားများသည်အခမဲ့ဖြစ်ပါသလား။ သူမစပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်။ Ramadan လေယာဉ်များ၊ Baskentray နှင့် Marmaray လေယာဉ်များသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀၊ မေလ (၂၃) ရက်၊ စနေနေ့၊ [ပို ... ]
စက်မှုနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ကြီး Mustafa Varank ကသမ္မတသည်တူရကီနိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာနှင့်မကြာမီပြီးစီးမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Varank က“ ရလဒ်နှင့်သက်ရောက်မှုကို ဦး တည်သည့်မဟာဗျူဟာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးတက်ချင်သည်” ဟုဆိုသည် စကားရပ် [ပို ... ]
egnegölမြူနီစီပယ်အားဖြင့် ၄ ရက်ကြာညမထွက်ရအမိန့်ကိုကန့်သတ်ထားစဉ် largelyardak ဗလီဝတ်ကျောင်းလမ်းဆုံ၌ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းများကို ၂၄/၇ ပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စမတ်အချက်ပြစနစ်အသုံးပြုသောဒေသတွင် [ပို ... ]
Coronavirus ကပ်ရောဂါကြောင့် 23ZBAN မှမေလ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ နှင့် ၂၆ ရက်များတွင်ညမထွက်ရအမိန့်နှင့် ပတ်သက်၍ နာရီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်İZBAN၏အလုပ်ချိန်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည် -
Kamuran Yazıcıကို ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် Trabzon တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ Karadeniz နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗိသုကာပညာဌာနမှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနမှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်သိပ္ပံအင်စတီကျုတွင်သူ၏မဟာဘွဲ့ကိုအတူတူပင်တက္ကသိုလ်တွင်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ သခင် [ပို ... ]
Day4ကြိုတင်ကန့်သတ်ချက် 'Turkey Peace Trust' လျှောက်လွှာတင်ပြီး
ယမန်နေ့ည ၈ နာရီမှ ၂၄ နာရီအထိတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းရှိလုံခြုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ လုံခြုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ Gendarmerie General Command နှင့်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့များကိုတူရကီယုံကြည်မှုငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုကျင်းပခဲ့သည်။ လက်တွေ့တွင် Eid al-Fitr [ပို ... ]
İsa Apaydın ကားအဘယ်သူနည်း
သတ္တုဗေဒအင်ဂျင်နီယာ၊ အများပိုင်မန်နေဂျာ၊ TCDD အထွေထွေမန်နေဂျာ။ သူသည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် Ankara ၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်သတ္တုဗေဒအင်ဂျင်နီယာဌာနမှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် Sakarya တက္ကသိုလ်သတ္တုဗေဒအင်ဂျင်နီယာဌာန၌မဟာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Vedat Bilgin ကဘယ်သူလဲ။
ဗီဒက် Bilgin (၁၉၅၄၊ စက်တင်ဘာ ၂၂ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်) Aydıntepeတူရကီလူမှုဗေဒပညာရှင်၊ ပညာရှင်၊ ဗျူရိုကရက်နှင့်စာရေးဆရာ။ Ziya Gokalp Mumtaz Turhan နှင့် Erol Güngörတို့သည်တူရကီအမျိုးသားရေးဝါဒ၊ ဒီမိုကရေစီ၊ လူမှုရေးပေါ်လစီ၊ တူရကီရှိသိပ္ပံ၊ [ပို ... ]
Birkan Erdal (1952, Ankara), Türk bürokrat ve siyasetçi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Fakültesi mezunudur. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde İşletme Yönetiminde Master yapmıştır. Türkiye Elektrik Kurumu, TESTAŞ [ပို ... ]
Ender Çetinkaya, (2 Nisan 1941, Adapazarı), Türk hukukçu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1964 yılında mezun olmuştur. İller Bankası İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı, TCDD Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı, Müşavir Avukatlığı, [ပို ... ]
Ahmet Sarp, (1931, Diyarbakır), bürokrat ve siyasetçi. 1953 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965-1967 Karayolları Kayseri Bölge Müdürü, 1967-1969 yıllarında Karayolları İzmir Bölge Müdürü, 1969-1974 [ပို ... ]